Andro trompetra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-04 > trompetra
Tamin'ny volana septambra, mankalaza ny Taom-baovao "Rosh Hashana" ny Jiosy, izay midika hoe "lohan'ny taona" amin'ny teny hebreo. Tafiditra amin'ny fomban-drazan'ny jiosy mihinana sombin-trondro iray izy ireo, tandindon'ny lohan'ny taona ary miaraka amin'ny "Leschana towa", izay midika hoe "Mandritra ny taona tsara!" dia midika hoe miarahaba. Araka ny lovantsofina, misy ifandraisany ny fetin'ny Rosh Hashana sy ny andro fahenina amin'ny herinandro namoronana, izay namoronan'Andriamanitra ny olona.
Ao amin'ny soratra hebreo ny 3. Bokin’i Mosesy 23,24 ny andro dia nomena hoe «Sikron Terua», izay midika hoe «Andro fahatsiarovana amin'ny fitsofana trompetra». Izany no nahatonga an'io andro firavoravoana io antsoina hoe "andron'ny trompetra" amin'ny teny alemana.
Raby maro no mampianatra fa ny shofar dia tokony hitsofoka ao Rosh Hashana in-100 farafaharatsiny, ao anatin'izany in-30 izany, hambara ny fanantenana ny fiavian'ny Mesia. Araka ny loharanom-baovao jiosy dia misy karazan'alika telo izay notsofina tamin'io andro io:
Teki'a - feo lava mitohy ho mariky ny fanantenana amin'ny herin'Andriamanitra ary ho fiderana fa izy no Andriamanitra (Israel).
Shevarim - Feo fohy fehezina telo kely izay maneho ny fidradradradrana sy ny fitarainan'ny fahotana sy ny zanak'olombelona latsaka.
Teru'a - feo sivy haingana, toy ny statoato (mitovy amin'ny feon'ny famantaranandro fanairana) hanehoana ny fon'ny torotoro an'ireo izay efa tonga eo anatrehan'Andriamanitra.
Nampiasa tandroka ondrilahy ny Israely fahiny tamin’ny voalohany. Lasa toy ny nataontsika anefa izany rehefa ela ny ela 4. Nianatra ny Mosesy 10, nosoloana trompetra (trompetra) vita tamin’ny volafotsy. Voalaza in-72 ao amin’ny Testamenta Taloha ny fampiasana trompetra.
Ny trompetra dia notsofina mba hanairana rehefa ao anaty loza, hiantso ny vahoaka ho amin'ny fiaraha-mifaly, hanao fanambarana, ary ho antso hivavaka. Tamin'ny fotoan'ny ady dia nampiasaina ny trompetra mba hanomanana ny miaramila amin'ny fanaparitahana azy ireo ary avy eo hanome ny mariky ny fiadiana amin'ny ady. Nolazaina tamin'ny trompetra koa ny fahatongavan'ny mpanjaka.
Ankehitriny, ny kristiana sasany dia mankalaza ny andro trompetra ho andro firavoravoana miaraka amin'ny serivisy ary mampifangaro izany amin'ny firesahana ireo fisehoan-javatra ho avy, amin'ny fiavian'i Jesosy fanindroany na fampakarana ny fiangonana.
Jesosy no solomaso ahafahantsika mandika tsara ny Baiboly iray manontolo. Fantatsika izao ny Testamenta Taloha (izay misy ny Fanekempihavanana Taloha) amin'ny alàlan'ny mason'ny Testamenta Vaovao (miaraka amin'ny Fanekempihavanana Vaovao izay notanterahin'i Jesosy Kristy tanteraka). Raha miroso amin'ny lalana mifamadika isika, ny fehin-kevitra diso dia hitarika antsika hino fa ny fanekena vaovao dia tsy hanomboka raha tsy amin'ny fiavian'i Jesosy Fanindroany. Fahadisoana lehibe io fiheverana io. Ny sasany mino fa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny tetezamita isika amin'ny fanekena taloha sy vaovao ary noho izany dia voatery hitandrina ny andro firavoravoana hebreo isika.
Tsy maharitra ilay fanekena taloha ary anisan’izany ny andron’ny trompetra. « Tamin'ny nanaovany hoe: Fanekena vaovao no nanaovany ny voalohany ho fanekena taloha. Fa izay antitra sy antitra dia efa akaiky ny farany » (Hebreo 8,17). Nampiasaina mba hanambarana ny fahatongavan’ny Mesia tamin’ny vahoaka. Ny fitsofana ny trompetra tamin’i Rosh Hashanah dia tsy vitan’ny hoe famantarana ny fiandohan’ny kalandrie fety fanao isan-taona teo amin’ny Isiraely, fa manambara koa ny hafatr’io andro firavoravoana io: “Ho avy ny Mpanjakantsika!”
Ny fetin'ny Isiraely dia mifandray indrindra amin'ny fijinjana. Avy hatrany talohan'ny festival voa voalohany, ny "Fetin'ny amboaram-boankazo voalohany", ny "Paska" sy ny "Fetin'ny mofo tsy misy masirasira" dia natao. Dimampolo andro taty aoriana, nankalaza ny fetin'ny fijinjana varimbazaha, ny "Fetin'ny Herinandro" (Pentekosta) ary ny fararano ny fetin'ny fijinjana lehibe, ny "Fetin'ny Tabernakla". Ankoatr'izay, ny festival dia manana lanjany lehibe ara-panahy sy ara-paminaniana.
Amiko, ny zava-dehibe indrindra amin'ny andron'ny trompetra dia ny fomba hanondroana an'i Jesosy sy ny fomba nanatanterahan'i Jesosy izany rehetra izany tamin'ny fahatongavany voalohany. Nanatanteraka ny andron’ny trompetra Jesosy tamin’ny alalan’ny fahatongavany ho nofo, ny asam-panavotana, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin’ny maty. Tamin’ny alalan’ireo “zava-nitranga teo amin’ny fiainan’i Kristy” ireo dia tsy vitan’ny hoe nanatanteraka ny fanekeny tamin’ny Isiraely (ny fanekena taloha) fotsiny Andriamanitra, fa niova mandrakizay koa. I Jesoa no lohan’ny taona – Loha, Tompon’ny fotoana rehetra, indrindra fa Izy no namorona ny fotoana. «Izy (Jesosy) no endrik’Andriamanitra tsy hita maso, ny Lahimatoa talohan’ny zavaboary rehetra. Fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, na hita na tsy hita, na seza fiandrianana, na fanapahana, na fahefana, na fahefana; Izy no nahariana ny zavatra rehetra sy ho Azy. Ary ambonin'ny zavatra rehetra Izy, ary ao aminy ny zavatra rehetra. Ary Izy no lohan'ny tena, dia ny fiangonana. Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin'ny maty, mba ho voalohany amin'ny zavatra rehetra Izy. Fa sitrak’Andriamanitra ny hamela ny be rehetra hitoetra ao aminy, ary amin’ny alalany no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy, na etỳ an-tany, na any an-danitra, amin’ny fanaovana ny fihavanana amin’ny rany teo amin’ny hazo fijaliana » (Kolosiana). 1,15- iray).
Nandresy i Jesosy teo amin'ny toerana tsy nahombiazan'ny Adama voalohany ary izy no Adama farany. Jesosy no zanak'ondrin'ny Paska, mofo tsy misy masirasira ary fampihavanana antsika. Izy no (ary tokana) nanaisotra ny fahotantsika. Jesosy no Sabatantsika ahitantsika fitsaharana amin'ny ota.
Amin'ny maha-Tompon'ny fotoana rehetra anao, dia ao aminao ankehitriny ary ianao ao aminy. Amin'ny fotoana rehetra iainanao dia masina satria miaina ny fiainam-piainan'i Jeso-Kristy izay manana fifandraisana aminy ianao. Jesosy no Mpanavotra anao, Mpamonjy, Mpamonjy, Mpanjaka sy Tomponao. Avelany hitsoka ny trompetra indray mandeha ihany!